नबिल बैंकले युनाइटेड फाइनान्सलाई प्राप्ती गर्ने सम्झौता, युनाइटेडको १०० कित्ता शेयरबराबर नबिलको ३५ कित्ता हुने - नेपालबहस
नबिल बैंकले युनाइटेड फाइनान्सलाई प्राप्ती गर्ने सम्झौता, युनाइटेडको १०० कित्ता शेयरबराबर नबिलको ३५ कित्ता हुने
१७ बैशाख, काठमाडौं । नबिल बैंकले युनाइटेड फाइनान्स एक्वायर गर्ने भएको छ। बैंकले शुक्रबार प्राप्तिका लागि युनाइटेडसँग एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको छ। नबिलका मर्जर संयोजक उदयकृष्ण उपाध्याय र युनाइटेडका मर्जर संयोजक मनिष खेमकाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।
नबिलले युनाइटेडलाई सय कित्ता शेयरबराबर नबिलको ३५ कित्ता कायम हुनेछ ।
प्राप्तीपछि युनाइटेड फाइनान्सको सम्पूर्ण कारोबार नबिलकै नाममा हुने र संचालक समिति पनि नबिल बैंककै रहने गरि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पश्चात प्राप्तीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतीका लागि प्रकृया अगाडि बढाइने छ । स्वीकृती पाएमा यथासिघ्र संयुक्त कारोबार नबिल बैंकले गर्नेछ ।
पाँचथरमा जेठ १७ गतेसम्म निषेधाज्ञा ७ मिनेट पहिले
दैलेखमा कोरोनाले एउटै समुदायका ९ जनाको मृत्यु ३९ मिनेट पहिले
उपनिर्वाचनमा संक्रमित मतदातालाई छुटै मतदान केन्द्र, कर्मचारीलाई पीपीई ! ५३ मिनेट पहिले
विद्यार्थीको पीडा : अनलाइनको आशै छैन, पशुचौपाया चराउँदै बित्छ दिन ! ५३ मिनेट पहिले
नागरिक लगानी कोषले गर्यो ५९ करोड बढि मुनाफा, प्रतिशेयर आम्दानी कति ? ५६ मिनेट पहिले
तीन कम्पनीको सर्किट लेभलमा कारोबार, कुनको प्रतिकित्ता शेयरमूल्य कति ? २२ घण्टा पहिले
सिमकोट विमानस्थलमा राखिएको खाद्यान्न ७ दिन पहिले
रुरु जलविद्युतको आईपीओले कति पाउला ओपनिङ्ग रेञ्ज ? ४ हप्ता पहिले
पर्सामा काेराेनाले थप दुई संक्रमितको ज्यान गयो ३ हप्ता पहिले
जे रोप्यो त्यही फल्छ १ वर्ष पहिले
बंगलादेशबाट मल नआउने, ओलीले फेरि पनि किसानलाई झुक्याए ! ६ महिना पहिले
सुनको मूर्ति भनी ठगी गर्ने २ जना पक्राउ १० महिना पहिले
खेतमा धान रोप्दै ११ महिना पहिले